Dopaminergic Neurons မှ ဦး နှောက်၏ကျယ်ပြန့်သောလှုပ်ရှားမှုများအားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်း (၂၀၁၆) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
Dopaminergic အာရုံခံ (2016) ကဦးနှောက် Wide လုပ်ဆောင်ချက် Dynamics ၏ညှိနှိုင်းရေး
Neuropsychopharmacology ။ 2016 သြဂုတ် 12 ။ Doi: 10.1038 / npp.2016.151 ။
Decot ဟောင်ကောင်1,2, Namboodiri VM က2,3, Gao W က4,5, McHenry ဂျေအေ2, Jennings JH1,2, Lee က SH5,6, Kantak PA ဆိုပြီး2, Kao YC5,6, Das က M5,6, Witten ခလရ7, Deisseroth K သည်8, Shih YY1,5,6,9, Stuber GD1,2,3.
ထိုကဲ့သို့သောစွဲနှင့် schizophrenia အဖြစ်အများအပြားအာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ရောဂါအခြေအနေများ, ventral tegmental ဧရိယာ dopaminergic (TH ၏ dysregulated လှုပ်ရှားမှုကနေပိုငျးတှငျပျေါပေါကျစခွေငျးငှါVTA) အာရုံခံအဖြစ် neurocircuit function ကိုပိုမိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ maladaptation မှ။
သို့သော် TH ရှိမရှိVTA လှုပ်ရှားမှုအကြီးစားဦးနှောက်-ကျယ်ပြန့်တဲ့ function မသိသောဖြစ်နေဆဲသက်ရောက်သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့ရွေးချယ် TH activatedVTA Transgene ကြွက်များတွင်အာရုံခံခြင်းနှင့်လှုံ့ဆော်မှု-evoked အလုပ်လုပ်တဲ့သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် (fMRI) ကို အသုံးပြု. တပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအပြောင်းအလဲများကိုရရှိလာတဲ့တိုင်းတာ။ စံ generalized linear မော်ဒယ် (GLM) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချဉ်းကပ်လျှောက်ထားခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကို TH ၏ရွေးချယ် optogenetic ဆွညွှန်ပြVTA အာရုံခံတစ် dopamine အဲဒီ receptor မှီခိုဖက်ရှင်အတွက် striatal ပစ်မှတ်ဒေသများတွင်နှောက်အသှေးကိုအသံအတိုးအကျယ် (CBV) အချက်ပြမှုများကိုမြှင့်တင်ရန်။
သို့သျောလညျး, တူညီတဲ့ Datasets ၏ဦးနှောက်-ကျယ်ပြန့် voxel-based ကျောင်းအုပ်ကြီးအစိတ်အပိုင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (PCA) dopaminergic မော်ဂျူပုံမှန်အား dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်ဘဲ, ဦးနှောက်တစ်လျှောက်လုံးအကြိမ်ကြိမ်အပိုဆောင်းခန္ဓာဗေဒကွဲပြားဒေသများမြှင့်လုပ်ဆောင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ TH ၏ထို့ပြင်ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာတွဲဖက်မှုVTA တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကြိမ်နှုန်းတစ် forepaw လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူအာရုံခံ activation မဟုတ်သီးသန့် somatosensory cortical အတွင်း, ထိုလှုံ့ဆော်မှု၏အာရုံခံကိုယ်စားပြုမှုတိုးချဲ့ပေမယ့်ဦးနှောက်-ကျယ်ပြန့်။
These ဒေတာ TH ၏မော်ဂျူအကြံပြုVTA အာရုံခံအများအပြားဖြန့်ဝေခန္ဓာဗေဒကွဲပြားဒေသများမရှိတိုက်ရိုက် TH အနည်းငယ်သာလက်ခံရရှိကြောင်းတောင်သူတို့အားဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ဒိုင်းနမစ် impact နိုင်ပါတယ်VTA input ကို။
10.1038 / npp.2016.151